Etu esi eji Mbugharị H6 gị dị ka okwu ọdịyo na Mevo | Martech Zone
Etu esi eji Mbugharị H6 gị dị ka ihu igwe dị na Mevo
Mgbe ụfọdụ, enweghị akwụkwọ na weebụsaịtị bụ n'ezie na-akụda mmụọ na-achọ a ton nke ikpe na njehie tupu ị nweta ihe na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Otu n'ime ndị ahịa m bụ nnukwu data center na midwest ha na-edokwa mba ahụ na asambodo. Ka anyị na-akwagide ọdịnaya oge ụfọdụ, Achọrọ m ịgbasawanye ikike ha ka ha nwee ike ịnyekwu uru maka atụmanya na ndị ahịa site na ndị ọzọ.
Live-nkwanye ụfọdụ nkọwa na ụkpụrụ ọhụrụ, ajụjụ ọnụ ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị ọkachamara, ma ọ bụ nanị inye ụfọdụ nnabata ma ọ bụ nche ndụmọdụ site n'oge ruo n'oge nwere ike ịbụ nnọọ ihe bara uru. Yabụ, enyere m aka wulite ụlọ ọrụ maka ịdekọ pọdkastị, vidio vidio, na ịghagharị ndụ.
Ha nwere nnukwu onu ulo ebe m kewaputara otu mpaghara ma jiri ya mechie ya na nkpuchi ya. Ekpebiri m iso ọkara a obere Mbido nke a Mevo ndụ-gụgharia igwefotonwere Mbugharị H6 edekọ, na wireless Shure lavalier igwe ikuku. Nke a pụtara na enwere m ike ịhazi n'ọtụtụ ebe ka mdekọ - site na tebụl oche ruo ebe ịnọdụ ala na ihe niile dị n'etiti.
N'ezie, ozugbo enwetara m akụrụngwa niile bụ mgbe m gbagidere nsogbu. Usoro Mbugharị H6 na Shure na-arụ ọrụ n'enweghị ntụpọ, mana enwere m oge na-anwa ịchọta etu esi eji Zoom H6 mee ihe dị ka interface ọdịyo na Mevo.
Mbugharị H6 na Mevo agbam ume
Otu ihe edeturu na nke a bụ na ịchọrọ iji Mevo Boost, nke gụnyere ikike ijikọ site na ntanetị maka iyi egwu, yana USB maka ọdịyo, ma nwee ike na batrị gbatịrị. M nwalere usoro iri na abuo di iche iche… na-anwa ichota ihe omuma site na Obere akwukwo nke Mevo nke gosipụtara Zoom H4n ma ọ bụghị H6… nke nwere nnukwu ọdịiche.
Ọ dịkarịrị ala karịa otú m chere:
Jikọọ Mbugharị H6 na Mevo Boost site na USB. Cheta na: Nke a agaghị eme ka Mbugharị H6 dị ike (Boo!) Yabụ ị ga - eji batrị.
Tụgharịa Mevo wee bia H6.
Na Mbugharị H6, ịkwesịrị ịnyagharịa site na sistemụ menu ma tọọ ya dị ka nyo okwu n'ihi na ndekọ ndekọ ọtụtụ n'ihi na PC / Mac na-eji ike batrị.
Nke a bụ ngebichi ahụ (etinyela uche na ihe menu ahọpụtara, M wepụtara foto ndị a site na akwụkwọ Mbugharị H6).
Jiri Mbugharị H6 gị dị ka ihu okwu ọdịyo
Họrọ Multi Track ka ị nwee ike iji ntinye okwu igwe okwu gị niile
D mKPA: Họrọ PC / Mac site na iji ike batrị
Ntinye Mevo USB
Ugbu a ị ga-enwe ike ịhụ USB dị ka ntinye ọdịyo na Mevo! Naanị pịa ka ijikọ ma ị ga-adị njikere ịga.
Akụkụ akụkụ, akwụkwọ maka Zoom H4n na-ekwu na mmepụta ọdịyo kwesịrị ịbụ 44kHz kama 48kHz. Na Zoom H6, enweghị m ike gbanwee ugboro ugboro nke mmepụta ahụ mgbe ejiri ya dị ka interface ọdịyo USB. Ọ bụrụ na ịmara etu, gwa m! Ọ dara ụda na 48kHz ka m jide n'aka na ọ dị mkpa.
ngosi: Ejiri m koodu mgbakwunye mmekọ Amazon na post a.
Tags: mevomevo agbam umegbanyụọmbugharị h6
Ntuziaka Kachasị Ewu maka Iwulite Usoro Ahịa Dijitalụ Gị